Sintomy Cessna 172 Amphibian G1000 MSFS 2020 - Freeware
Ity ny Cessna 172 Skyhawk Amphibian, mpikambana matanjaka ao amin'ny fianakaviana Skyhawk afaka miverina sy miantsona vetivety, miorina eo amin'ny Lycoming 210HP STC:
Ity dia patch amin'ny fiaramanidina ao amin'ny Skybok an'i Asobo ary manampy fiaramanidina vaovao amin'ny hangar (hita eo am-piandohana: litera C ... toa an'i Cessna)
Ny fanovana ny maodely 3D fiaramanidina Asobo Skyhawk tany am-boalohany dia misy:
Mitsingevana Wipline 2350, miaraka amina tariby ivelany, fitaovam-pitaterana azo averina.
Sportsman STOL Camber Cuffs amin'ny fenders.
Nitombo ny zoro an'ireo kapila.
Ny fanovana ny maodelin'ny sidina dia misy:
Hery lehibe kokoa noho ny motera STC 210HP 4-varingarina
Tapakila 4-toerana (0 °, 10 °, 20 ° ary hatramin'ny 40 °)
Malemy paika rehefa miantsona amin'ny ranomasina (toy ny eny an-tanety) ianao, miezaha tsy hianjera, sao hianjera ianao.
Zahao ny mari-pamantarana ny fitaovana ao anaty paosy sy eo amin'ilay mitsingevana eo am-baravarankely: tsy maintsy esorina ny fitaovana rehefa hiantsona.
Ny cockpit dia izao an'ny Asobo C172 misy sambo mitsingevana: noho izany dia ho hitanao ny fantsom-piarovan-trondro, ary ny fantsom-pirinty amin'ny rano.
Mipetraka amin'ny tany:
Tsy maintsy esorina ny familiana rano
Ny familiana any anaty tany dia mila ampiasaina amin'ny fanamafisam-peo tsy mitovy (manapaka ankavia na ankavanana), saingy tsy notanterahiko ny fifehezana familiana, ka mbola azonao ampiasaina izany.
Misy atiny maromaro tafiditra ao anatin'ity fiaramanidina ity:
Natolotra amin'ny toerana misy anao, manga sy volondavenona, misaotra an'i ANN0V
Wendy misaotra an'ny 270INC
Livery mena sy livery maitso, aingam-panahy avy amin'ny tena livery ny amoron-dranomasina C172.
Modely amin'ny sidina:
Ny maodelin'ny sidina dia mifototra amin'ny asan'ny mpijinjaS73 amin'ny C172 STC 210HP STOL G1000 ary mamela ny fiasa amin'ny maody STOL any amin'ireo faritra kirihitra.
Aiza no mankany amin'ny ranomasina:
Mazava ho azy, na aiza na aiza!
Hahita toerana tena tsara tarehy be dia be ianao miaraka amin'ny seranan-tsambo, pontoons, marina amin'ny flightim.to
Raha tsy fantatrao hoe aiza no hanombohana azy, zahao ireo seranan-tsambon'i Alaska tsara tarehy noforonin'i Photosbykev sy sjfly2.
Momba an'ity mody ity:
Ny maodely 3D dia namboarina tamin'ny Blender avy amin'ny fanondranana ilay maodely Skyhawk G1000 Asobo voalohany.
Ny firafitra ivelany sy ny sarimiaina rehetra dia tokony havaozina ary mifanaraka amin'ny famaritana voalohany.
Ireo floats dia namboarina tamin'ny maodely Wipline (c)
Misaotra betsaka an'ireo andiam-pandrosoana Newktv, izay nanampy betsaka.
Misaotra betsaka an'i EzRyder izay namantatra ny fomba fampiasana ny cockpit MikeFear303 mahazatra ho an'ny cockpit XML sy ny paikadin'ny rafitra!
Misaotra manokana an'ny 270INC miaraka amin'i liend Wendy.
Updated on 20 / 08 / 2021 - Version 1.4.0
- Fampiasana modely anatiny anatiny an'ny Asobo's C172 amin'ny maodely G1000 sy mahazatra:
- Fitaovana fametahana sy fampitaovana
- arina familiana rano
- Fampiasana ny maodelin'ny sidina Asobo amin'ny rano
Updated on 10 / 08 / 2021 - Version 1.3.0
- Feo amin'ny rano ny rano
- Tsy dia manintona intsony izao ny dinamika amin'ny sidina amin'ny rano
- Wendy text rework misaotra ny AIRPAC1
Updated on 29 / 06 / 2021 - Version 1.2.1
- Namboarina ny endrik'ilay mpanao fanatanjahantena
- Mametaka glitch livery ambanin'ny elatra
Updated on 19 / 06 / 2021 - Version 1.2.0
- Raikitra ny famerenan'ny solika
- Indikatiora Gear amin'ny ilany ankavanana koa
- Toerana mitsingevana anaty rano voahitsy
- Fitaovana rivets (amin'ny fiaramanidina) raikitra
Misaotra betsaka an'i Airmoose1 amin'ny valiny mahasoa rehetra avy amin'ny mpanamory fiaramanidina tena izy!
Nohavaozina taminy 09 / 06 / 2021 - Version 1.1.0
Misaotra ny hevitrao rehetra momba ny famoahana voalohany ny fiaramanidina.
Fantatro fa be ny asa tokony hatao. Ity misy fanavaozana voalohany:
- Namboarina ny propa manjavozavo
- Nipetraka lalina loatra tao anaty rano ny sambo
- Fitaovana rivets miorina amin'ny liend Wendy
- Feo vaovao ho an'ny familiana rano manitatra / mihemotra
- Feo vaovao ho an'ny fitaovana mihitatra / mihemotra
- Manitatra / mampihemotra ny fotoana ny familiana rano (simulate lever manual)
- Ny fanadiovana rakitra tsy misy ilana azy ao anaty fonosana
- Fampiasana modern_fm_only = 1
- Amboary haingana ny zava-misy fa tena matanjaka loatra ny fiaramanidina (mila ezaka mafy izany)
Faly manidina sy milomano
Nalefa tamin'ny 05/06/2021
Navoaka vao haingana ny fisian'ity rakitra ity. Tongasoa eto an-tsambo!